Lokho kubalulekile ukwakha imaski impungushe?
Fox, kanye izimpisi, amabhere - umlingisi edume kakhulu inganekwane futhi magic ngemifanekiso. Kulesi sihloko sizofunda ngokuthi singakugwema kanjani kute wente imaskhi of impungushe ngezandla zakhe futhi ukuthi lokhu kudinga. Uzodinga impela kancane imizamo, isikhathi kanye izinto.
Kanjani kute wente imaskhi iphepha plain?
Ukushaya imaski engabizi, ukuthenga iphepha anemibala ngobuciko zezingane, iglu, izimpawu kanye izindophi ezimbili. Uzodinga iphepha noma amakhadibhodi e ezine imibala - orange, orange ukukhanya, ezimnyama. Okokuqala, ukusika black iphepha ngalé empumulweni impungushe. Khona-ke, usayizi cut ishidi orange ngalé eyodwa lincane odlule cishe isentimitha. Ngaphezu kwalokho, kusukela orange ukukhanya ephepheni ngalé ukuphuma ikhala namehlo. Futhi yenza onxantathu ezimbili ezincane izindlebe. Black amakhadibhodi wenze ekhaleni encane esingunxantathu futhi amadevu. leaf Red usike amashiya amahle obukhulu. Ukunamathisela zonke izingcezu ndawonye. Ohlangothini imaskhi impungushe uthayi intambo ngayinye. The Mask ulungile!
Yini edingekayo ukuze udale azenze wawungathi impungushe?
Uzodinga izinto ezilandelayo: kanzima wazizwa amamilimitha angu ezimbili noma ezintathu ewugqinsi (orange, omnyama nomhlophe), imicu, inaliti sezinsini. Okokuqala, ukudweba iphethini ephepheni empumulweni impungushe. Sika futhi babiza wawungathi orange. Circle iphethini ngoshoki wanquma nomlomo we impungushe isivele wazizwa. Ngendlela efanayo ukwenza izihlathi ka wazizwa ekhaleni mhlophe futhi onxantathu ezimhlophe, lapho thunga kuya lugs. Thunga nomlomo ukuze izihlathi, ikhala kanye onxantathu emhlophe. Chanterelle isicishe ilungele! Uma unomuzwa wokuthi imaskhi buphendukile baba abantamo ngokwanele, ungakwazi thunga ku bephambene ngesinye isendlalelo wawungathi emaplastikini lacinile nobe ebhokisini. Kulokhu, umkhiqizo wakho ngeke umbimbi kakhulu. Futhi, ungakwazi ukuhlobisa imaski yakhe izimpungushe, ukufekethisa amadevu akhe omnyama amashiya. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa ehlotshiswe noboya bokuzenzela noma ezingokwemvelo.
Isivuvu impungushe noboya
buso emangalisayo enhle eyatholakala kusukela impungushe noboya. Ukwakha umkhiqizo elinjalo kufanele uqale ukusika kumila nomlomo amakhadibhodi obukhulu futhi iqine. Nomlomo ungenza ngobuningi, uma usike izingxenye ezingaphezu futhi lezo nabo. Beka izingcezu amakhadibhodi ungcono nje tape ezicucwini zamaphepha ofakwe glue PVA. Uma isizinda usulungile, ngokushesha thunga intambo yakhe zokuthola ekhanda. Khona-ke thatha noboya of obomvu, abamhlophe nabansundu. Namathela ke njengoba kuboniswe esithombeni. Phawula ukuthi isiqondiso kwezintambo zesivikelo sesifuba noboya kumelwe isuke ekhaleni ezindlebeni.
Yini enye eningayenza wente imaskhi of impungushe?
Yenza kungenzeka akwenzanga nje amakhadibhodi, wazizwa noma uboya. Uma ufuna impungushe imaski ekhanda lakhe kwaba namandla futhi iqine, kungaba ukubunjwa kusukela polymer nobumba. Kodwa uqaphele ukuthi le nto uzodinga ubhake kuhovini ukwenza kube okuqinile. Ungazama kute wente imaskhi ngebumba samozastyvayuschey, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba, cishe, ulula kakhulu.
impungushe imaski nayo kahle etholwe papier-Mache. Ukuze wenze lokhu, uzodinga ukuthenga ethile kwezobuciko noma ukumodeliswa ubumba zezingane futhi ukubunjwa imodeli ke ubuso. Khona-ke thatha iphepha futhi likhiphe ku izingcezu ezincane. Cwilisa izingcezu i PVA ingcina futhi obkleyte empumulweni impungushe aphume plasticine. Yenza indlela izingqimba ezintathu kuya kweziyishumi. Khumbula, inani elikhulu izingqimba uzokwenza impungushe yakho imaski okuhlala isikhathi eside futhi abupheli.
Phela izingqimba esomile, susa imaskhi nobumba. Manje umkhiqizo kungenziwa zaveza! It is kangcono salokhu upende injongo acrylic. Uma upende usuwomile ngokuphelele, ukumboza imaskhi ukuvenisha. Yenza amacala komkhiqizo nge izimbobo usungulo kuzo futhi Lwemicu intambo. The Mask ulungile!
Isikhafu eluke amagoda izinaliti: iphethini umdwebo incazelo
Indlela ukulungisa amajazi fur bebodwa?
Cacisa izici zemvelo nezenhlalo imvelo komuntu
Amahebezi nenhlebo - kungcono into efanayo noma cha?
Ukudla izinsuku on apula. Izinzuzo nezingozi nebubi